बुलेट बाईक सहित बेपत्ता पंकज मृत भेटिए - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रदेश बुलेट बाईक सहित बेपत्ता पंकज मृत भेटिए
स्याङ्जा । बुलेट बाईक सहित एक महिनादेखि बेपत्ता स्याङ्जाका पंकज गिरी मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिका वडा नं. २ भालुपहाडस्थित भिरमा उनको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख एसपी बिमलराज कणेलले जानकारी दिए । पंकजले लगाएको कपडाको आधारमा उनका बाबुले पहिचान गरेको कणेलको भनाई छ । यसअघि आईतवार सिद्धार्थ राजमार्ग भन्दा ५/६ सय मीटर तल भालुपहाडको फेदी स्थित सेतीखोलाको जलकुण्डमा बुलेट मोटरसाइकल भेटिएको थियो ।
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका वडा नं. ५ सेखाम काम्तीका १९ वर्षीय पंकज गिरी गत असार १८ गतेदेखि बुलेट मोटरसाईकल सहित बेपत्ता भएका थिए । पुतलीबजार नगरपालिकाको बाड्खोलाबाट साथीहरुसँग अन्तिम पटक सम्पर्कमा आएका उनी त्यही दिन देखि बेपत्ता रहेका थिए । बेपत्ता भएपछि गिरीका परिवारले खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जामा जानकारी सहितको निवेदन दर्ता गरेका थिए । खोलामा माछा मार्न गएका व्यक्तिले खोलामा मोटर साइकल देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीसहितको टोली सोमबार बिहानैबाट पंकजको खोजीमा जुटेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस पत्रकार घिमिरे र आचार्यलाई शैलजा आचार्य पत्रकारिता पुरस्कार
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ पस्र्याङमा बस्दै आएका मृतक गिरी ना ४० प ३७२० नम्बरको हरियो रंगको बुलेट बाइक भाडामा लिएर हिडेको आफन्तको भनाई छ । घटनाबारे अनुसन्धान शुरु गरिएको स्याङ्जाका प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
बिचार ऋषि धमला - March 2, 2020
तीन दशक लामो कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव सँगालेका विनयमोहन क्वात्राको नेपाल आगमन चासोको विषय बनेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालका लागि...
Editor-Picks दीपक ओली - August 25, 2020
धनगढी । कैलालीमा आइसोलेसनमा रहेकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ११ को आइसोलेसनमा रहेकी ३५ वर्षीया महिलाको सोमबार...
प्रदेश ३ नारायण अधिकारी/रासस - July 21, 2020
चितवन । नारायणी नदीको बहाव आज बिहान ४४ वर्षयताको सबैभन्दा उच्च भएको छ । बिहान ९ बजे नदीको बहाव ९ दशमलव ९१ मिटर पुगेको...
प्रदेश ३ टेनिस रोका - March 2, 2020
यो पनि पढ्नुहोस संक्रमित कैदी आइसोलेसनबाट फरार